Wasiirka xannaanada xoolaha Somaliland oo ka warramay qorshayaal cusub oo tacabka xoolaha ah iyo xannaanadooda caafimaad. – Radio Daljir
Wasiirka xannaanada xoolaha Somaliland oo ka warramay qorshayaal cusub oo tacabka xoolaha ah iyo xannaanadooda caafimaad.
Janaayo 29, 2013 10:57 b 0
Hargeysa, Jan 29 – Wasiirka xannaanada xoolaha Somaliland Dr. Cabdi Aw-daahir Cali, ayaa maanta oo (Talaado ah) ?tafaasiil ka bixiyey qorshayaal ballaaran oo ay waddo wasaaraddiisa iyo wasaarado kale, kaasoo dhiira-galinaya dhaqashada xoolaha.
Wasiirku, waxaa uu sheegay muddo in ay wadeen dadaal arrinkaasi la xiriira, ayna unkeen guddiyo isku-dhaf ah oo ay xubno ka yihiin dawladda, ganacsatada iyo xoolo-dhaqatada, kuwaasi oo ku hawllanaan doona sidii wax looga baddali lahaa habka xoolalayda reer Somaliland, iyadoo la abuurayo hannaan lagu maalgashado xoolaha.
Dr. Cabdi Aw-daahir, waxaa uu intaasi ku daray in ay lagama maarmaan tahay tabaca iyo maalgalinta xoolaha nool, aysan mug-weyn lahayn hooyada iyo aabaha reer miyiga ah in looga haro dhawrista iyo dhaqista xoolaha.
Wasiir, waxaa sidoo kale uu sheegay sannadkii tagay ee 2012-ka deegaanadda Somaliland in ay ka dhoofeen xoolo aad u tiro badan, waxaana dibedda loo raray 3,200,000 kun neef oo Ari ah, halka lo’dana ay ka dhoofeen 158,000 kun, iyadoo xagga Geelana la dhoofiyey 125,000 kun neef.
Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo booqanaya deegaano ka mida Galguduud.